အထူးစပါယ်ရှယ် Set (3) Set နဲ့ Bonchon ရဲ့ Chill Mal Promotion | The Restaurant Guides for Myanmar
အထူးစပါယ်ရှယ် Set (3) Set နဲ့ Bonchon ရဲ့ Chill Mal Promotion
ကိုရီးယားစတိုင် ကြက်ကြော်အပြင် ဆိုဂျုလေးတွေပါ ရတဲ့အတွက် Bonchon ဟာနာမည်ကြီးပါတယ်။လှည်းတန်းမှာ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးမှာဆို Decoration လေးတွေလည်း လှတဲ့အတွက် လူငယ်တွေကြားထဲမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုလို ရောဂါတွေ ထူပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သွားလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ ဒီလိုမသွားရလို့ BonChon ကိုလွမ်းနေရင်တော့ အခုပြောပြမယ့် Set လေးတွေက စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်ရစေမှာပါ။
ဒီ Set လေးမှာတော့ Large Combo Mix,Small Boneless နဲ့ Signature Yogurt Soju (any flavour) ဆိုပြီးပါဝင်မှာပါ။Large Combo Mix မှာဆိုရင်4wings+2 drumsticks ပါပြီးတော့ Small Boneless မှာဆိုရင်လည်း 4pcs ထိတောင်ပါမယ့်အပြင် စျေးကိုလည်း ပုံမှန်စျေး (20000) ကနေ (15000) ထိပဲကျသင့်မှာတဲ့နော်။
Chill Mal 1
ဒီ Combo လေးမှာဆိုရင် Large Wings,Daikon,Carlsberg Beer Can နဲ့ Korean Soju ဆိုပြီး စားဖို့ရော သောက်ဖို့ပါ စုံစုံလင်လင် ပါပါတယ်။စျေးနှုန်းဆိုရင်လည်း ပုံမှန် (21000) ကနေ (16000) ပဲပေးရမှာတဲ့။
Chill Mal 2
ဒီ Combo ကကျတော့ Carlsberg မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Tuborg နဲ့အစားထိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီး ကျန်တာတွေကတော့ Chill Mal 1 လိုပဲ Large Wings,Daikon,Korean Soju တွေပါမှာပါ။ စျေးနှုန်းကတော့ ပုံမှန်စျေး (20000) ကိုမှ Promotion စျေး ( 15500) ပါ။
Shop(1): :Junction City(5th),free floor court,yangon.
Shop(2): :Myanmar Plaza-3rd,yangon
Shop(3): :Junction Square,new food square area(Beside Harry's Bar),yangon
Shop(4): :No(27)Zayar Thiri and Insein streets corner,Hledan Kamayut Township,Yangon.
Shop(5): :No(7)room 1B,Ground floor,Yay Kyaw Street,Yangon,11171